China LITTLE GIRL LIGHTSTICK fekitari uye vagadziri | Rwizi Rwizi
KADUKU KASIKANA KAMWEDZI
Ko hove dzinobatira matanda dzinoshanda sei?
Kubata Kupenya Zvimiti shandisa kemikari kuita kuti ibudise mwenje. Kana kacapsule kemukati kaputsika nekukotamisa kamuti, iko kuita kwemakemikari kunoitika uye hove yekupisa inotanga kupenya.
Nei kubata hove kunobatsira kubata hove dzakawanda?
Inoita chirauro kutaridzika kupenya kukwezva kwakawanda hove
Inoita chirauro chinoita kunge chakakura
Zvinoshanda zvinokurudzira kwazvakarerekera kana zvisina kunaka hove dzekuruma
Imwe yematambudziko makuru nehove yehusiku kuona matipi matanda. Vamwe vanhu vanofarira kushandisa mabhero kuzivisa hove dzinoruma. Nekudaro, iwo mabhero anogona kunetsa kubata kana uchinge wakandwa kana kudzosera muhove. Kuredza kupenya kamuti inogona kushandiswa kutsiva mabhero kugara uchiongorora matipi matanda.
Matanda emwenje ekubata hove akasungirirwa sei kumitsara kana hoko dzehove?
Shandisa maoko epurasitiki anouya nematanda ekubatanidza kune zviredzo kana mitsetse. Sunga tambo yakatetepa kuburikidza nesleeve, wobva waisa tambo yechiedza mune iyo ruoko, netambo yakatetepa yakasunga, sunga tambo kuita tambo kana hoko. Vamwe vevatengi vedu vanoshandisawo tepi yemagetsi yekubatanidza.
Vanopenya kwenguva yakareba sei?
Anenge maawa makumi maviri.
Izvo zvisina-chepfu here? Uye Ndeapi mavara aripo?
Hongu ivo havana-chepfu. Inowanikwa muGreen.
FOB Mutengo: US $ 0.35 ~ 0.75 / pcs
Pasuru: OEM pasuru
Customization: Yakasarudzika logo, kurongedza
Kupa Mazano: 10000 bhokisi pavhiki
Yedu fekitori kurongedza: 2pcs / bhegi, 50bag / yemukati bhokisi, Iyo yakazara ye100pcs
Mamwe mabhizinesi papuratifomu kurongedza: 5pcs / bhegi, 10bag / bhokisi remukati, Hwerengedzo ye50pcs
Mutengo wefekitori yedu ndiwo wakaderera. Hatisi kambani yekutengesa,
Isu tinopa iyo purofiti yevatengesi vepakati zvakananga kune vatengi vedu.
MuChina, Isu tiri vokutanga vagadziri vanogadzira hove mwenje.
Pamusoro peiyo yakazara indasitiri inotungamira garandi fomura tekinoroji, zvigadzirwa zvedu zvinogona kurarama mumusika kweanopfuura makore makumi maviri.
Zvigadzirwa zvedu zvine chikamu che3 / 5 yemusika wepasi rose.
Zvigadzirwa zvakawanda mumusika zviri kutitevedzera, uye zvimwe zvinotogadzirwa kubva mufomula yezvigadzirwa zvechizvarwa chekutanga. Iyo luminescence nguva yechizvarwa chekutanga chigadzirwa iri pasi pechishanu chechimwe cheicho chedu chigadzirwa chazvino
Kutarisira kumberi kwekutanga kubatana newe！
Kavha : 2pcs / kurongedza, 50packs / bhokisi, kana zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Kubhadhara: TT / Paypal / Trade Assurance uye zvichingodaro
Dhirivhari Nzira: Negungwa kana neMhepo kuburikidza neUPS / DHL / TNT / FEDEX zvichingodaro
Pashure: JAPANESE DIAMOND RIMWEDZI
Zvadaro: U DZAKATEVEDZEDZWA RIMWE
1. Ini ndingave nemitengo yezvigadzirwa zvako?
Mauya. Pls inzwa wakasununguka kutitumira email pano. Uchawana mhinduro yedu mumaawa makumi maviri nemana
2. Tinogona here kudhinda yedu logo / webhusaiti / zita rekambani pane zvigadzirwa?
Ehe, ndapota raira saizi uye Pantone Code yeiyo logo.
3. Ndeipi inguva yekutungamira yekugara uchihodha?
7-10 mazuva ekuraira huwandu hwakaderera pane 1000pc; Kuwedzera huwandu, kazhinji mazuva makumi maviri
4. Ndingawana dhisikaundi here?
Ehe, pamutengo wekuraira wega unodarika $ 1000, ndapota taura nesu kuti tiwane mutengo wakanakisa.
5. Unoongorora zvakagadzirwa zvigadzirwa here?
Hongu, nhanho yega yega yekugadzira uye zvigadzirwa zvakapedzwa zvichabuda kuongororwa neQC department isati yatumirwa.
1. Isu tiri nyanzvi yekugadzira hove dzinopenya matanda, uye tine makore anopfuura makumi maviri ekuziva kunze kwenyika.
2. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kune nyika zhinji uye matunhu epasi, achiverengera 3/5 yemugove wepasi rose wemusika.
3. Isu ndisu bhizinesi rekutanga kugadzira fomura yechigadzirwa, munzvimbo inotungamira muindasitiri, mhando inovimbiswa zvachose.
4. Isu tine yedu yega brand uye trademark patents. Isu tinotsigirawo kugadziriswa kwakagadziriswa.
5. Mari shoma ndiyo musimboti wekugadzirwa kwekambani.
Kubata Kuvhenekera Mwenje Kunamira
kuredza kupenya kwetsvimbo inogadzira
Kubata Chiedza Chitanda
hove inopenya tsvimbo
kupenya murima hove dzinoyangarara
kupenya kwekubata hove
VATengi VANoshanya News
Factory Yakananga φ2.9 φ4.5 Chiedza chemwenje
Fekitori Yakanangana -4.0 Classical mwenje
Yakareba Nguva Inopenya Nguva Mini Husiku Inoyerera Clip Fishin ...
Fekitori yakananga φ3.0 φ3.5 φ4.5 Mahwendefa mashanu pabhegi
5pcs / Bhegi 10 Maawa Kupenya Zvimiti Kubata Kuyangarara Lig ...